Qurxoon oo farsamo sameeyayaal ah oo sameeya qaxwada | Bezzia
Maria vazquez | 06/04/2021 12:00 | Karinta
Diyaarinta kafeega waxay inbadan oo naga mid ah u tahay caado taas oo daqiiqad raaxo iyo degenaansho ay ka bilaabato subaxa dhexe ama galabtii. In sidaa la yeelo waxaan haysannaa beddelaadyo badan, oo ah sameeyayaasha qaxwaha faleebo ah in maanta aan soo jeedinayno waxa ugufiican ee lagu gaaro kafee jilicsan laakiin leh dhadhan badan.
Qurux badan, wax ku ool ah oo aan xadhig lahayn, Sidan ayaa ah sida sameeyayaasha qaxwaha faleebada gacanta ah aan maanta ugu soo jeedinayno Bezzia. Dhammaantood waxay ku qalabaysan yihiin shaandho oo kafee dhulka ah la dhigo oo biyaha kulul gacantooda lagu shubo laakiin leh siyaalo kala duwan oo lagu shubo qaxwada. Melitta, Chemex ama Hario, adigu dooro!
Qarniyaal, kafeega waxaa lagu diyaarin jiray kuleylka biyaha ee kuleylka kafee. Waana mashiinadan kafee si qaab cayiman u ilaaliya nuxurkaas laakiin hagaajiya dhadhanka ugu dambeeya ee kafeega. Si fudud loo isticmaalo, iyaguna way leeyihiin Faa'iidooyin badan oo ka sarreeya noocyada kale ee kafee sameeyaha:
Meel yar ayey ka qaataan jikada.
Way fududahay oo way fududahay in la qaado.
Way qurux badan yihiin. Waxay u muuqdaan kuwo fiican oo ku saabsan Miiska jikada.
Uma baahna fiilooyin.
Hawlgalkeedu waa mid fudud
Fudeydnimadiisu waxay ka dhigeysaa cimri dhererkeedu mid sareeya.
4 Sida loo sameeyo kafee
Ma ogtahay inuu ahaa aasaasihii Melitta kii ikhtiraacay shaandhaynta kafeega sanadkii 1908dii. Markii dambe, 30-meeyadii Melitta Bentz waxay soo bandhigtay shaandhooyin macmal ah taas oo kor u qaadday tayada kafeega iyadoo soo saaraysa aag balaaran oo laga soo saaro. Shaandheeyeyaasha aan maanta naqaanno oo summad u noqday shirkadda.
Waxaad ka heli doontaa buugga 'Melitta' balaastig, galaas iyo galaas galayaasha haysta leh jeexdin cusub oo xaqiijiya soo saarista kafeega isku dheelitiran. Intaa waxaa dheer, labadeeda furitaan ayaa kuu oggolaan doonta inaad la wadaagto raaxada cabitaanka kafeega, maadaama aad laba diyaarin karto isla waqtigaas. Kagama qiimo badnaan doonto wax ka badan € 17.
Fatalooladaha lagu daro Melitta Pour Over karafe galafe ayaa sii wada inay kuu oggolaadaan maanta qaxwaha ugu kari qaab fudud oo xarrago leh tiro wanaagsan oo dad ah. Karaafku wuxuu ka samaysan yahay muraayad borosilicate ah waxaana loo isticmaali karaa cabitaanno kulul ama qabow iyada oo aan loo baahnayn in la jabiyo. Waxay ku habboon tahay microwave-ka iyada oo ay ugu wacan tahay daboolka laga saari karo si fudud ayaa loogu dhaqi karaa mashiinka weelka lagu dhaqo.
Jugga halyeeyga ah ee dhalada muraayadaha Chemex waxaa ikhtiraacay farmashiyaha reer Jarmal ee Peter Schlumbohm sanadkii 1941. Naqshadeeda nadiif ah oo fudud Waxay uga dhigeysaa mid ufiican korka miiska dushiisa. Moodellada leh alwaax gacmeed ayaa si gaar ah u muuqda, sidoo kale waxay siisaa diirimaad naqshadeynta, waxay kaa ilaalin doontaa inaad gubato markaad haysato muraayadda kulul.
Qaxwadayaasha sameeya gacanta ayaa lagu heli karaa cabbirro kala duwan si ay uga sameeyaan min seddex illaa saddex iyo toban koob. Naqshadeynta miirayaasha fiber-keedu waa gaar, ka dhumuc weyn tartanka si aad koobkaaga uga ilaaliso walxaha qadhaadh, saliidaha iyo miraha.
Hario waxaa lagu aasaasay Tokyo sanadkii 1921 wuxuuna asal ahaan soo saaray alaabooyin dhalo ah oo loogu talagalay shaybaarada kiimikada. Qalabkaaga ugu caansan V60, Waxaa loo sameeyay in lagu hagaajiyo filtarrada xilligaa jiray. Xagasha 60º, biyuhu waxay u qulqulayaan bartamaha wax shiida, iyagoo dheereynaya waqtiga xiriirka.
Kaarafkan iyo koorta ayaa la dhigay si aad u sameysid qaxwada la sifeeyey ayaa ku habboon sidaa darteed, qiimo jaban (€ 25), waxaad ku heli kartaa waxaad u baahan tahay si aad ugu sameysid qaxwaha si xirfadaysan guriga. Si tan loo gaaro, waa inaad raacdaa tilmaamaha shirkadda.
Sida loo sameeyo kafee
Kasta oo sameeyaha qaxwaha qaxwaha ee aad doorato, habka loo diyaariyo kafeega wuxuu noqon doonaa mid aad isugu eg kala duwanaanta kaliya saamiga kafeega iyo biyaha lagama maarmaanka u ah helitaanka natiijada ugu fiican. Ku miirashada miiraha biyo kulul, miisaanka dhulka ee qaxwada miraha dhexdhexaadka ah kuna qaybin si siman shaandhada ayaa ah tillaabooyinka ugu horreeya ee la raaco.
Markaa waa inaad kuleylka biyaha ku shubtaa weel gooseneck ah. Sababta sababta oo ah tan way kuu sahlanaan doontaa inaad ku darto biyo kulul kafeega dhaqdhaqaaq wareeg ah min xarunta ilaa banaanka. Heerkulka biyaha ayaa waliba muhiim noqon doona; Waa inuu u dhexeeyaa 90 ilaa 94 digrii. Haddii aadan haysan heerkulbeegga, waxay kugu filnaan doontaa inaad fuusho illaa 40 ilbidhiqsi ka dib markay karkarto.
Waxaa jira fiidiyowyo badan oo YouTube ah oo leh talooyin wax ku ool ah oo loogu talagalay adeegsiga kuwan buugga sameeyaya qaxwaha ah, iska hubi!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Karinta » Qaxwaha gacmeed qurux badan oo wax ku ool ah oo sameeya qaxwada
Sababta guusha taxanaha 'Ginny iyo Georgia' ee Netflix